ကမ္ဘောဒီးယား (38) ဗီယက်နမ် (18) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (17) မြန်မာ (11) ထိုင််း (10) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (4) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (4) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (4) အင်ဒိုနီးရှား (4) မလေးရှား (4) ဖိလစ်ပိုင် (4) စင်္ကာပူ (4) တီမော လက်စ်တေ (4) Global (2) မဲခေါင် (2)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (39) ခမာဘာသာစကား (19) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (10) ဗမာဘာသာစကား (3) ထိုင်း (1)
သတင်းအချက်အလက်များ ... (63) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (16) အုပ်ချုပ်ရေး (7) ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာ... (6) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်... (5) အစိုးရ (4) Internet (4) အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်င... (3) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (3) သစ်တောများ နှင့် သစ... (3) လူ့အခွင့်အရေး (3) သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်... (3) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (2) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (2) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျ... (2) စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေ... (2) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (2) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (2) မြေအောက်သယံဇာတ ထုတ်... (2) မြေအောက်သယံဇာတထုတ်ယ... (2) လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပ... (2) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရ... (2) ရဲဝန်ထမ်းများ (2) ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအစိ... (2) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (2) Sustainable develop... (2) နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ... (2) သင့်လျော်အောင် စီစဉ... (1) စိုက်ပျိုးရေး (1) ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ငွ... (1) ဇီဝမျိုးကွဲများ (1) အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ (1) ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ (1) ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အ... (1) ဆောက်လုပ်ရေး (1) လူ့အခွင့်အရေးဖွံ့ဖြ... (1) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး... (1) ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆေ... (1) ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင... (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (1) သစ်တောထွက်ကုန်များ (1) Free prior and info... (1) ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည... (1) မြေယာ (1) မြေယာလွှဲပြောင်းမှု... (1) ဥပဒေနှင့် တရားစီရင်ရေး (1) ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထ... (1) ဥပဒေရေးရာအကူအညီ (1) ဥပဒေရေးရာမူဘောင်များ (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Access to information
ကမ္ဘောဒီးယား Issue and policy briefs 2021 ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
The digital economy and social policy framework of Cambodia 2021-2035 sets outalong-term vision for buildingavibrant digital economy and society by laying the foundations...
ကမ္ဘောဒီးယား Guidelines, instruction manuals, handbooks Cambodian Center for Independent Media (CCIM) 2021 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ, ဥပဒေရေးရာအကူအညီ
CCIM is making profile of6organizations providing the legal services to human rights defenders and journalists at risks. Those organizations such as Cambodia Human Rights and...
မြန်မာနိုင်ငံ စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု
မြန်မာ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) အာရှဖောင်ဒေးရှင်း , မြန်မာနိုင်ငံ စာအုပ်စာတမ်းထောက်ပံ့ရေးနှင့်... 2014 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ဤစာကြည့်တိုက်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိ ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာသည့် ပထမဆုံးသော လေ့လာတင်ပြမှု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါ ...
မဲခေါင် Issue and policy briefs Open Development Mekong 2021 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Vamoeurn Nimol and Júlia Garcia Puig 2020 ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
This survey report intends to formulate an up-to-date picture of available and emerging open data resources on the National Committee for Sub-national Democratic Development...
ကမ္ဘောဒီးယား Advocacy and promotional materials Commissariat of Phnom Penh Municipal Police 2020 ရဲဝန်ထမ်းများ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
The Commissariat of Phnom Penh Municipal Police has published brochures providing telephone numbers for people to contact when facing problems, including the contact numbers of...
ကမ္ဘောဒီးယား Guidelines, instruction manuals, handbooks Ministry of Economy and Finance 2020 ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအစိုးရများ, ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ
These budget books were attached to Prakas No. 1457 dated December 30, 2019 of the Ministry of Economy and Finance, which shown the revenue and expenditure management of the...
Global Books and book chapters Cleophas Ambira, Adrian Brown, Pyrou Chung, David Giaretta, Andrew... 2020 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
This book explores, throughaseries of case studies, the substantial challenges for assembling reliable data and statistics to address pressing development challenges....
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD) 2009 ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအစိုးရများ, ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (MLCS ၂၀၁၇)၊ အစီရင်ခံစာ ၀၄ - လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ
မြန်မာ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Myanmar’s Central Statistical Organization, UNDP, World Bank သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေ အနေစစ်တမ်း (MLCS ၂၀၁၇) သည် မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဘက်စုံအိမ်ထောင်စု...
Global Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Fabrizio Scrollini, Katie Clancy, Silvana Fumega and Ana Sofia Ruiz 2020 ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား Books and book chapters UNESCO, Julie Posetti, Cherilyn Ireton, Claire Wardle, Hossein... 2018 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား Advocacy and promotional materials Family Health International 360 (FHI360) 2020 ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း နှင့် အာဏာမျှဝေသုံးစွဲခြင်း, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Open Development Cambodia 2020 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) 2008 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး, အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ
This report focuses on the news media of Cambodia - television and radio stations, newspapers and, toalimited extent, the Internet. It will look at the media fromahuman...
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) World Bank, Andreasson, Kim Johan; Boyera, Stepahane; Herzog,... 2019 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေး
The Digital Government Readiness Assessment aims to find out about the potential for digital government development in Vietnam by looking into 07 key dimensions: Leadership and...
ကမ္ဘောဒီးယား Advocacy and promotional materials Police inspectorship of Takhmao town 2020 ရဲဝန်ထမ်းများ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ádám Földes with contributions from the relevant Transparency... 2018 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု